I-A1 A2 A3 Indwangu Yokugqoka I-Tshirt Printer China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-A1 A3 T Shirt,I-Black Cloth Garment Printer,Iphrinta ye-Digital Tshirt
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > I-A1 A2 A3 Indwangu Yokugqoka I-Tshirt Printer
I-A1 A2 i-A3 Indwangu Isigqoko Iphrinta ye-Tshirt iyindlela entsha yokwenza ubuciko esandleni sokudweba, zonke izinhlobo zokunyathelisa ukudlulisa, ubuchwepheshe bokunyathelisa kwesikrini. Sebenzisa inkinobho ye-UV, ngaphandle kwe-T-shirt, esebenzayo cishe zonke izinhlobo zempahla nesithombe kungaba nombala oqondile ophrintiwe yilo mshini, njenge: Icingo lefoni Isikhumba, i-Glass, iLebhu .Computer.Crystal.KT Board.Acrylic.PVC.ABS. I-EVA.Islastiki.I-PowerMobile.Stone.U disk.Gelisi gel nezinye izinto, ngemva kokunyathelisa, ukuphrinta kunamathele kakhulu ukugqoka.scrape.alcohol scrub.waterproof.fade-resistant. I- A1 A2 A3 T Shirt Printer iqaphele ngempela umuzwa weqiniso we-piece eyodwa ukuphrinta up, akukho ukubeka ipulatifomu, okungukuthi isifutho somile, isithombe sombala ngokuphelele. Kungaba njalo njenge- Black Blackth Garment Printer. Ukunyathelisa kwe-T-Shirt noma i-T-Shirt yokunyathelisa yedijithali kuyinkqubo yokunyathelisa izithombe ezigcwele imibala ezembatho. I-DTG ingasetshenziselwa izingubo ezikhanyayo noma ezibomvu. Ukusebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokuphrinta kanye nemishini ephezulu ye-DTG, singaphrinta izithombe ezigcwele imibala ku-T-Shirts, ama-polo, ama-hoodies nezinye izingubo.
Iphrinta ye-Digital Tshirt iphrinta yohlu lokunyathelisa uhlobo lwe-inkjet oluphezulu lwe-digital imishini yokunyathelisa yedijithali eyenza into engeyona yokuxhumana, insimu yesicelo sayo inkulu kakhulu, kuyindlela emisha yezobuchwepheshe ekudwebeni ngesandla, izinhlobo eziningi zokunyathelisa ukudlulisa, ubuchwepheshe bokunyathelisa kwesikrini. I- lso ayikho isidingo sokuvikela emva kokunyathelisa, ingasindisa lo muntu; emva kokushicilela kusomile kahle, ukuphikisana kakhulu ukugqoka, ukukhwabanisa, ukuphuza utshwala, ukungena kwamanzi; iphethini inemibala, ayikho isidingo i-ICC; ngeke lixhumane ikhanda lokuphrinta uma ungasebenzisi umshini 1 inyanga, izindleko eziphelele ziphansi kakhulu. Iqaphela ngempela umqondo weqiniso weyodwa uhlamvu oluphrintiwe phezulu, akukho ukufaka ipuleti, isithombe esigcwele umbala uma usuqedile.
Uma kuqhathaniswa nezobuchwepheshe bendabuko, i-RFC Digital Digital Tshirt Printer ikusiza ukuthi ulondoloze ukunyathelisa kwesikrini, ukunyathelisa ukushisa nokushisa kwezinqubo zendabuko eyinkimbinkimbi, ihlukana nokunciphisa umbala wenkinobho yendabuko, lo mkhakha uthatha ukukhiqizwa kwemishini, ukunciphisa umsebenzi izindleko, inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephakeme ephelele izuzwe ngempela! Ingaveza isithombe sombala wesithombe kunoma yikuphi okubonakalayo, okumibalabala, okugqoke ukugqoka, okungahambisani nokuqeda, ngaphandle kokwenza ipuleti, inkululeko yombala, ukunyathelisa okukodwa kanye nezinye izici ukusheshisa inqubo yedijithali embonini yokunyathelisa, ukukhiqiza okukhulu okuphelele nokukhiqiza isevisi ye-100% emva kokuthengisa.
Iphrinta ye-A1 A3 T Shirt I-Black Cloth Garment Printer Iphrinta ye-Digital Tshirt Iphrinta ye-A3 T Shirt Iphrinta ye-A2 T Shirt Iphrinta ye-A3 Dtg T Shirt Iphrinta ye-Art Word T Shirt Iphrinta ye-A3 Small Shirt